Off-grid solar wind diesel hybrid ugesi uhlelo - China Renergy Izinsiza kusebenza Co., Ltd
Off-grid solar wind diesel hybrid ugesi uhlelo
Ukusebenza isimiso kohlelo:
Umoya ephendulwa kanye solar panel ugesi, ugesi likhokhelwa eqenjini yebhethri isilawuli ukushaja, bese ngokusebenzisa inverter, ohlelweni lokuthengwa kwempahla AC imithwalo. Udizili generator isetshenziswa njengophawu amandla isipele, sizoqala lapho umoya solar kukhona okunganele, ukushaja ku ibhethri ukuvikela ibhethri.
Lolu hlelo is kabanzi lapho kungekho amandla endaweni akude; Ukuze kuncishiswe ukusetshenziswa kwamandla kanye imvelo ukungcola bese ugcine izindleko, kusebenza komoya futhi amandla elanga ukuhlangabezana nezidingo Ukusetshenziswa kwamandla. Lolu hlelo kungaba ukusebenzisa ngokugcwele amandla izinto ezintsha futhi bathuthukise entsha amandla kahle ukunciphisa udizili ukusetshenziswa futhi imvelo ukungcoliswa ukulondoloza amandla
RW-5kW iphimbo variable, DC240V
Off-grid solar wind diesel hybrid isilawuli
umoya 5kW, solar 5kW, DC240V
umklamo Modularized; siwethembe kakhudlwana uhlelo ngokusebenzisa design eziphindaphindekayo, oqinisekisa uhlelo usengakwazi ukusebenza lapho omunye subsystems has ukungasebenzi.
amandla Good supply isiqinisekiso
Multiple amandla complementation; ukulawula amandla ukalwe ukushintshela udizili i-Ukusetshenziswa kwamandla lapho uhlelo lukagesi enganele futhi Okwamanje anqunywe umthwalo ezingadingekile ukuze sandise isikhathi amandla uhlelo supply.
ukusebenza kahle High
Njengoba amandla eyinhloko kungukuhlasela ezingabazisayo elinganiselwe, nekusebenta uhlelo kumelwe siyazise; uhlelo usebenzisa IGBT amandla amamojuli nokulawula PWM imodi ukunciphisa ukusetshenziswa uhlelo lukagesi.
Uhlelo isebenzisa design Modular ukuze kuqinisekwe ukuthi scalability uhlelo; ukunikeza inkinobho ukwandisa amandla uhlelo umthamo ukuze uqiniseke ukuthuthukisa uhlelo
Lonke uhlelo lokusebenza usebenzisa indlela othomathikhi ukulawula uhlelo futhi sinciphise isilawuli womuntu, hhayi kuphela ukwenza ngcono ukusebenza kahle ukusebenza, kodwa futhi ukwandisa ukuphepha uhlelo nokwethembeka
Ikhaya isicelo, isiqhingi, isigodi esincane, amandla esiteshini izinkampani ezincane, igridi uhlelo, ezifuywayo, Holdings amancane asemaphandleni, ezolimo, commercial.
isikhathi Iposi: Apr-03-2018